राखीको हनिमूनमा लफडा (फोटो फिचर) - Experience Best News from Nepal
राखीको हनिमूनमा लफडा (फोटो फिचर)
बलिउडको आइटम गर्ल राखी सावन्तको विवाह भएको छ कि छैन यो कुराको अझै पुष्टि भएको छैन । तर उनले आफ्नो विवाह भइसक्यो भनेर भनिसकेकी छिन् । विवाहसँग सम्बन्धित केही तस्विर पनि उनले शेयर गरेकी छिन् । तर उनले श्रीमानको तस्विर भने शेयर गरेकी छैनिन् ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा राखीको यो कुनै ड्रामा त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, यो कुराको खण्डन गर्दै राखीले आफू चाडै हनिमून मनाउने भनेर सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
राखीले इन्स्टाग्राममार्फत यस कुराको जानकारी दिएकी हुन् । साथमा उनले आफ्नो विवाह र हनिमूनसँगै बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतको नाम पनि लिएकी छिन् । केही दिन पहिले उनले विवाहसँग सम्बन्धित आफ्ना तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी थिइन् । तस्विरमा उनका पति भने देखिएका छैनन् । यसैबीच राखीलाई प्रश्नको ओइरो आएको छ, विवाह भएको हो कि होइन ?
एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कमेन्ट गरेका छन्, ‘कंगनाको उक्त फिल्ममा विवाह भएको थिएन, तपाइँको त विहे भयो नि, अनि कंगना र तपाइँ कसरी एउटै हुनुभयो ?’ अर्का व्यक्तिले कमेन्ट गरेका छन्, ‘वास्तवमा विवाह नै भएको छैन होला अनि एक्लै नगएर के गर्ने त ?’
राखीले २८ जुलाईमा मुम्बईको एक ठूलो होटलमा गुपचुप विवाह गरेकी थिइन् । उनको कुरा पत्याने होभने, राखीले आफ्नो एक फ्यानसँग विहे गरेकी हुन् । उनका पति अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको एक कम्पनीमा काम गर्छन् ।
फेरी सफल बन्दै आयुष्मान, कस्तो छ चलचित्र ‘बाला’ ? हेर्नुहोस् बाला बारे केहि प्रतिक्रिया !!
वर्षमा ४ फिल्म गर्ने अक्षय कुमार बने बलिउडकै सबैभन्दा महंगा अभिनेता !!
४६ की भइन् ऐश्वर्या , ४६ लागेकी ऐश्वर्यालाई के भन्छन अभिषेकले
सलमान खानको धमाकेदार चलचित्र “दबंग ३ ” को ट्रेलर सार्वजनिक !!
एक्सन र कमेडीले ले भरिएको सलमान खानको दबंग3को ट्रेलर सार्बजनिक